हाम्रो देशमा फेरि कुनै आ’क्रमण हुनु हुँदैन : तालिवानी नेता ! – Nepal Online Khabar
हाम्रो देशमा फेरि कुनै आ’क्रमण हुनु हुँदैन : तालिवानी नेता !
भाद्र १५, २०७८ मंगलबार 158
काठमाडौं : तालिवान नेताहरूले विमानस्थलमा सैन्य पोशाक लगाएका आफ्ना ल’डाकुहरुलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी सेनाले काबुल विमानस्थल छोडेपछि उनीहरुलाई स्वतन्त्रताको लागि बधाई दिएका छन्।
तालिवानका प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले उनीहरुलाई भने, हामीलाई तिमीहरुको ब’लिदानमा गर्व छ। यो नेताहरुले राखेको क’ठिनाईहरुका कारण मात्र सम्भव भएको छ। यो हाम्रा नेताहरुको इमानदारी र धैर्यताको परिणाम हो कि हामी आज स्वतन्त्र छौं।
उनले भने, ‘म ल’डाकुलाई र अफगानिस्तानलाई बधाई दिन्छु। हाम्रो देशमा फेरि कुनै आ’क्रमण हुनु हुँदैन। हामी खुशी, समृद्धि र एक साँचो इस्लामी व्यवस्था चाहन्छौं ।’ उनले तालिवान ल’डाकूहरुलाई अफगानिस्तानका जनतालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन्।
जबीहुल्लाहले भने, ‘म यो पनि चाहन्छु कि तपाइँ मानिसहरुसंग तपाइको व्यवहारको बारेमा सावधान रहनुहोस। यस देशले धेरै दुः ख भोग्नु परेको छ। अफगान जनता माया र सहानुभूतिको हकदार छन्।
त्यसैले उनीहरुलाई सम्मानको साथ व्यवहार गर्नुहोस्। नोकर हुन्। हामीले उनीहरुलाई आफूहरुलाई लगाएका छैनौं।’विमानस्थलमा तालिवानका अर्का नेता हंस हक्कानीले भने, ‘अफगानिस्तानका जनता खुसी छन् यद्यपि यो भन्दा पहिला धेरै तत्वहरु शान्ति चाहँदैनथे थियो, उनीहरु अमेरिकी कब्जा टिकाउन चाहान्थे ।’
Prevएमाले छाड्ने प्रदेश-१ का १० सांसदकाे सामुहिक निर्णय-भोलि निर्वाचन आयोग जाने !
Nextएमालेले दिँदैछ यस्तो निर्णय, दशैं अगावै ठूलै राजनीतिक भूकम्पको ख’तरा ?
विवादास्पद एन्टिभाइरसका निर्माता म्याकफी कारागारभित्रै मृत भेटिए
आजबाट जीवन विकास लघुवित्तको आईपीओमा आवेदन खुला
मेस्सीलाई रामोसको प्रश्न :- ‘यो कसैले सोचेको थियो र, लियाे’ ?